Gorsa Mimmi’ooftuu Kudhan! – OLI
Gorsa Mimmi’ooftuu Kudhan!
July 13, 2018 July 13, 2018 OLI
Har’a akkuman ganama hirribarraa ka’een imala jireenyaakoo waggoottan hedduuf keessa dabre yaadadhe. Kunoo Ergan Barumsa Koo Xumuree Yunivarsitiirraa eebbifamee Ganni kudhan guutuun dabreera . Yaa Rabbi guyyaan akkamitti fiiga?! Umriin keennas akkanumatti qaari’aa jira jechuudhaa bar😨 Dhugumatti ariitiin yeroo kuni baay’ee nama dinqa… nuti osoodhuma ijoollee of seenuu yeroon imalaa jirti.
Waggaan Kurnan ani keessa dabre kun kan bu’aa ba’iin hedduun guutameedha. Bu’aa bahii kana keessatti waan heddun arge, waan heddu baradhe. Wantootni Ani Baradhe Osoo Lakkaawwamanii heddu, haata’uu garuu hunda isaanii himanii fixuun hin danda’amu.
Mee har’aaf barmootawwan ijoo kurnan kana dubbisaa, yoo isin fayyadu ta’es waa irraa fudhadhaa!
1. Obsa Qabaadhu ~ nama hadhooytuu liqimsetu mi’ooftuu mi’aa isii beeka, nama dhiphina argetu bal’ina waanii isii beeka. Yeroo kamuu keessatti ati Obsuma qabaadhu, ciniinnadhuu bira darbi. Hunduu yeroo eeggateetuma dhufa, tokkorraa tokkotti ce’uuf garuu obsi baay’ee barbaachisaa ta’uu hin dagatin;
2. Eebba Namaa Dandeettu Jilbiiffadhuu Aamin Jedhi ~ xiqqalleen si eebbisu aamin jedhi, guddalleen si eebbisu aamin jedhi, yoo aamin jettummoo kolfaaf qoosaa osoo hin ta’in onnee qulqulluun aaamin jedhi. Akkasuma Abaarsa halaalatti ofirraa eegi;
3. Nama Kamuu Hin Tuffatin, Namattis Dhara hin yaadin ~ guddaa kabajjee xinnaa hin tuffatin, ka qabu kabajjee kan hin qabne bira hin darbin. Boru eennun maaltu akka mudatu hin beektu, hundaa namooma isaanitiin kabaji. Ilmoo namaa kamityuu dhara hin yaadin, ati jaalattus jibbitus Rabbiin waan namaaf keennuuf lafa olkaaye ati himna ittiin dhoorkitu hin qabdu;
4. Hariiroo Namaan Waliin Qabdu Cimsi ~ qabeenyi guddaan ati qabdu nama ati wal barteeni, nama addummaa jaalatu hin ta’in, nama hin barbaadu hin jedhin, adaduma nama barataa deemtun daandin bal’inaa siif banamaa adeemtii;
5. Kitaaba Dubbisi ~ haguma dandeettun waa dubbisuu baradhu, waan dubbiste hojirra oolchuf tattafadhu, waan irraa barattes namootaaf qooduf yaali. Namni dubbisu yeroo kamiyyuu haaromaa adeema.
6. Kaayyookee Tasuma Hin Irraanfatin ~ Namni gara imalu hin beekne garuma karaan isaan imalte deema. Namni gara deemu beeku garuu akkaataa kamiin eddoo yaade sana akka gahuu dandahu ni hubata. Kunimmoo waan xixinnoo daandii irratti nama mudatan bifa salphaa taheen bira dabruuf nama fayyada. Namni kaayyoof galma irratti xiyyeeffatu wantoota xixinnoodhaan hin baaragu, of duubas hin deebi’u.
7. Tattaaffadhu / Carraa Si bira Jiru Ija Lameenin ilaali ~ osoo fagoo hin mil’atin, osoo bahar gama qalbin sin kutin dura carraafi hiree si bira jirtu daawwadhu, hamma dandeetten carraa si bira jirutti fayyadamuuf yaali, nama waan kaluu isaa jirturraa fayyadametu riqichi biraa isaaf banamaa;
8. Siyaasa Eeggadhu ~ dargagummaan nama onnachiifti, onneen qofti immoo eessanuu nama hin geettu. Siyaasa beeki, baradhu, sirritti addaan baafadhu, garuu akka jabdutti eeggadhu. Yoo ati siyaasatti garmalee gamtu nama heddutu akka malee sitti gama. Hedduutu sirraan tarkaanfatee, qilee si buusee ofii nyaachuu barbaada, kanaaf carraa hin kennin;
9. Waa Shakkuu Baradhu ~ nama hundas, waan argitu hundas hin amanin. Waa shakkuu baradhu, waan sitti dhufe hundaa utaalte hayyee jettee ofitti fudhachuu keetin dura #Maalif? Jedhii gaafadhu. Yoo si jibbanis yoo si jaalatanis #Maalif jechuu hin irraanfatin;
10. Namarra Heddu Hin Eegin ~ abaluu kiyyatu naaf jira jettee waan guddaa eenyurraayyuu hin abdatin. Guyyaa wanta eeyde nama eeydurraa dhabde mataan si bowwaafataa, firooma keetis dhabdaa. Waan dandeettu namaaf godhi malee namatu kana naa godha jettee namarraa waa hin eegin;
← What do the Oromo People say About Jawar Mohammed’s Return to Home? Survey Reveals